Ny kofehy tsara tarehy tsara tarehy dia heverina ho fandravahana feno ao amin'ny efitrano. Indraindray misy karazany maro ao anatiny, dia afaka manja-menaka amin'ny tananao ianao, satria misy marika maromaro mitombina izay manova tanteraka ny toe-javatra. Ny manam-pahaizana dia manolo-kevitra ny mifidy loko mifanaraka amin'ny lamin'ny loko anatiny , fa tsy eo ambanin'ny fantsona fanaka. Ny tsotra kokoa dia ny famolavolana ao amin'ny efitrano, izay mihalava kokoa sy mahavariana ny fitoeran'ny fonosana.
Ahoana no hanamboarana sifotra tsara?
Eto dia miankina amin'ny zava-kendren'ny ondana ny zava-drehetra. Raha miresaka momba ny singa miavaka isika, dia afaka mampiasa fitaovana isan-karazany maromaro, fa ho ampiasaina amin'ny fomba tsy tapaka voajanahary voajanahary. Diniho ny toro-hevitra vitsivitsy momba ny fomba hanamboarana seza kely.
Ahoana no ahazoana kofehy amin'ny sofina? Ankehitriny dia lasa malaza kokoa io safidy io. Ny sofina dia natao amin'ny podsika sy ny lamba rongony. Alohan'ny ahitanao sombin-tsofina amin'ny sofina dia mila manaisotra ny sombin-doko ianao ary asio santimetatra vitsivitsy amin'ny alim-bidy sy ny sofina. Eo am-panaovana azy manontolo ao anatin'ny herin'ny mpandraharaha vaovao. Mba hanaovana izany, dia ampiasao matetika ny lamba kofehy matevina. Mitondra oxford na lamba rongony.
Raha vao manomboka amin'ny orinasan-tsirambina ianao dia andramo amin'ny takelaka kely misy zipo, satria ity no dikan-teny tsotra indrindra ataonao. Ilaina fotsiny ny manodina ny ondana, mametraka azy amin'ny lamba iray, ary raha tokony ho iray amin'ny marin-drano manja ny bibilava. Ilaina ny manomboka amin'ny bibilava iray, ary mametraka ny tadiny hafa.
Ny tany lonaka indrindra ho an'ny fampisehoana ny hevitr'izy ireo dia kesika. Alohan'ny ahitanao pilina miaraka amin'ny palma, maka fotoana kely hisafidianana ny lamba. Tsara kokoa raha tsy mitovy ny loko misy ny fanaka sy ny fitaovana fanenomana. Mandehana ny fifanoherana ary aza mametra ny tenanao amin'ny fisafidianana ny fitaovana. Jereo tsara ny silk, noho ny fingotra dia azonao ampiasaina ny dantelina na ny guipure, koa ny vatanao samihafa ho an'ny curtain koa dia mety.
Ahoana no hanamboarana kiraro misy ankizy?
Manolotra torolalana tsotra isan-karazany isika amin'ny ohatra amin'ny fonon'ny ankizy iray. Ho an'ny asa dia mila:
fanjaitra sy kofehy amin'ny tonony;
kalsa amin'ny hety;
Hevero izao ny kilasy maoderina tsotra, ahoana no ahafahana manja-menaka amin'ny tananao.
Mamefy ny lavany sy ny haben'ny ondana. Amin'io tranga io dia maherin'ny 37x54 cm ny refy. Ny lamosina dia refy misy 40x131 cm. Ampiantsika 1.5 cm ny entana, 20 cm ny fofona.
Rehefa mandeha any amin'ny magazay ianao, dia manamboatra lamaody ho an'ny tenanao ny fandrosoana eo amin'ny taratasy iray, mba hahafahanao misafidy ny sakan'ny sakan'ny sakany sy ny halavany. Ankoatra izany, rehefa manitsy dia manamboatra fihenam-bidy amin'ny fihenan'ny tavy rehefa avy misasa. Ny fomba tsotra indrindra dia ny tsy fanaovana fahadisoana, ny fanasana ny lamba alohan'ny famotehana.
Rehefa tapaka ny tapa-damba dia ilaina ny manamboatra raozy eo amin'ny lafiny fohy ao amin'ny faritra. Voalohany, miisa 0,75 sm izahay, ary faharoa. Noho izany dia hitoetra ao anaty ny vatany ary tsy hikorontana.
Fenitra fanasan-tongotra na penina. Tsikitsiky kely: raha hifikitra amin'ny tsipika mahitsy amin'ny tsipika ny tsindrona, tsy handingana azy ireo ilay milina.
Mamboraka ny lamba ao anaty, miaraka amin'ny fofona sisa tavela. Mametraka tsipika eo anoloana amin'ny lafiny roa amin'ny lavany 0,5 cm avy amin'ny sisiny.
Mamadika ny fonosana ao anatiny isika ary manamboatra ny fitifirana. Avereno indray ny tsipika mankany amin'ny sisiny eo amin'ny 0,6 cm eo ho eo. Noho izany, ny sisin'ny lamba dia hafenina ao anaty fotaka.
Ny doka toy izany dia antsoina hoe double.
Tratra ny zazakely.
Tontolon'ny haba amin'ny tanany
Modular origami - harona
Boky ho an'ny USB flash mitondra tànana manokana - fanomezana tsy mahazatra
Bouquet avy amin'ny chupa-chups amin'ny tanana manokana
Famolavolana savony amin'ny tanany manokana
Ahoana ny fomba hanapahana zioga?
Lolo amin'ny tanany
Fitaovana avy amin'ny modules triangular
Kilasy Master amin'ny tavoahangy plastika
Ny fomba hikarakarana azalea - toro-lalana ho an'ny mpamboly
Ny kalitaon'ny ankizy dia mandeha
Conjunctivitis - fitsaboana amin'ny olon-dehibe
Aquarius - vato amin'ny famantarana ny zodiaka
Ahoana no hamenoana ny voambolana amin'ny teny hentitra?
Sandals amin'ny kipantsona - ahoana no fomba hamoronana sary maoderina sy ny hevitry ny stylists
Andro famoahana amin'ny buckwheat sy kefir
Kolotsain'ny kabarin'ny mpandraharaha
Ny ondriny amin'ny tanany ihany
Manolora ny mama amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany
Trends lohataona-fahavaratra 2018 - akanjon'ny vehivavy, akanjo, accessories, loko, hatsaran-tarehy amin'ny vanim-potoana vaovao
Ahoana no hitehirizana apples amin'ny ririnina?
Mpivarotra akanjo amin'ny gona anglisy